Ahoana ny fampifandraisana haingana ny AirPods amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fampifandraisana haingana ny AirPods amin'ny Mac
Raha mpampiasa Espaniôla ianao dia mety efa mankafy ny anao AirPods, saingy mazava fa maro no mbola miandry ny fahazoana azy ireo ary izany dia i Apple mihitsy no mametraka ny daty fahatongavana amin'ny fandefasana manaraka ao anatin'ny enim-bolana.
Eo am-piandrasana ny hividianana ny sasany dia afaka mamaky lahatsoratra toy izao izay hanazavana ny fomba hampifandraisana azy ireo amin'ny Mac.
Ny iray amin'ireo asan'ny kintana AirPods dia ny fahatsorana ahafahantsika mampiasa azy ireo amin'ny alàlan'ny fampifandraisana saika avy hatrany misy fitaovana Apple na Android mifanentana rehetra ary ny Airpods koa dia miasa eo ambanin'ny Android.
Raha misy olana momba anay ato amin'ity bilaogy ity dia tianay haseho anao ny fomba fampifandraisana azy ireo amin'ny Mac anao. Ny zavatra voalohany tokony ho ao an-tsainao dia ny tsy maintsy apetrakao ny rafitra mety:
iPhone, iPad na iPod mikasika ny iOS 10.2 na taty aoriana.
Apple Watch miaraka amin'ny watchOS 3 na taty aoriana.
Mac miaraka amin'ny macOS Sierra na aoriana.
Raha hampifandray ny AirPods amin'ny Mac ianao nefa tsy manao izany amin'ny iPhone dia tsy maintsy manokatra ny saron'ny boaty famahana ianao ary avy eo tsindrio ny bokotra fanamboarana aoriana mandra-pahazavana ny jiro LED anatiny. Amin'izay fotoana izay, raha mankany amin'ny bara ambony an'ny Finder ianao ary tsindrio ny kisary feo ao amin'ny menio mitete, dia hiseho ireo AirPods ary rehefa misafidy azy ireo ianao dia hampifangaro azy ireo tsy ho an'ny Mac ihany, fa amin'ny fitaovana rehetra anaovanao ny kaonty iCloud anao.
Io no tombony lehibe azo avy amin'ny AirPods ary rehefa ampiarahinao amin'ny fitaovana mifanaraka amin'ny iCloud izy ireo dia efa ampiarahinao amin'ny fitaovana sisa rehetra. Izany no antony raha ampitahanao voalohany amin'ny iPhone azy ireo, rehefa alefao ny Mac ary apetrakao amin'ny écouteur dia mankany amin'ny kisary feo eo amin'ny bara ambony an'ny Finder ianao ary ao no hamelanao azy ireo.
Ary farany, raha te hahalala ny bateria navelan'ny finday tsirairay ianao ary koa ny boaty fitoeram-bokatra, dia tsy maintsy tsindrio ny kisary Bluetooth ao amin'ny zoro ambony an'ny Finder ary ao amin'ny dropdown dia azonao atao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Ahoana ny fampifandraisana haingana ny AirPods amin'ny Mac
Fa azo atao ve izany amin'ny iMac rehetra, ohatra?
Manana iray aho tamin'ny 2010 ary tsy azoko. Heveriko fa tsy maintsy misy Bluetooth 4.0,
ary ny ahy manana 2.1.
Ernesto Carlos Hurtado Garcia dia hoy izy:
Nampifandraisiko tamin'ny iMac 2008 izy ireo, saingy ny haavon'ny feo dia tsy araka ny tiana (heno ny tabataba ary very ny fifandraisana amin'ny fotoana sasany). Amin'ny sisa amin'ireo fitaovana dia tsotra izany ary azo henoina tanteraka izy ireo. Mba hampifandraisana azy ireo amin'ny iMac, nosokafako ny safidin'ny Bluetooth ary tsindrio ny bokotra aoriana ny tranga izay ahatongavan'ny Airpods, ary nifandray tao anatin'ny 5 segondra izy ireo.
Valiny tamin'i Ernesto Carlos Hurtado García
Ny boky Namboarin'i Apple any California dia misy any Espana sy firenena hafa izao
Apple dia heverina ho orinasa mifandray indrindra amin'ny tontolo iainana